Soo Iibso Bisad Soo Jiidasho & Dayax Leh 925 silsilad silsilad silsilad silsilad ah - Maraakiib Bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
Qalabka & Saacadaha
Boorsooyinka & Boorsooyinka
Ilmaha & Carruurta
Caafimaadka & Beauty
Qalabka & Qalabka
Guriga & Makhaayadda
★ Worldwide Shipping Shipping
♥ 99% Woopers Happy Woopers
★ Lacagaha Canshuurta Lama Yaabo
Bisad quruxsan & dayax nadiif ah 925 silsilad silsilad silsilad ah
dib u eegista 17
$ 11.99 qiimaha joogtada ah $ 21.99
Nooca: Dharka Haweenka
Gem Color White
Length 40 in 45mm
Caddaan / 40 illaa 45mm
tirada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + tirada
Bisad quruxsan & dayax nadiif ah 925 silsilad silsilad silloon ah - Caddaan / 40 illaa 45mm gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Si kalsooni leh u dukaamee
☑ Gaadiidka Caalamiga ah ee bilaashka ah.
☑ Lacag Canshuur ah Lama Yaabo.
☑ Dammaanadda Saacadaha Ugu Fiican.
Lacag celin hadii aadan helin amarkaaga.
Soo celinta & Hayso sheyga, haddii uusan ahayn sidii lagu tilmaamay.
Nooca silsilad: Chokers murriyado
Nooca Shahaadada: GDTC
Dhagax Weyn: None
Biraha Nooca: Silver
Saxanka Birta: 925, Sterling
Nooca Chain: Link Chain
Nooca Item: murriyado
Dagno \_ hannaankii: Animal
Style: Xafiiska / mustaqbalkiisa
Number Model: YSN015
Fine ama Fashion: Fine
Sifaha Sare: 22 * 15mm
Style Jewelry: Necklaces Naqshadaynta Haweenka
munaasabadda: Aroos, hawlgal, sanad guurada, xaflada, nolol maalmeedka
Hadiyad: Gabar, afada, hooyada, hooyo
Cabbirka Dhuxusha: 22x15MM
Naqshadeynta silsiladda leh: Qaabka bisadda bisadda
Miisaanka Luqunta jilicsan: 2g
Macaamiisha WoopShop waxay wadaagaan khibradooda togan ee Trustpilot.
Qaado ereygeenna taas
Lacag Soocelin Buuxda haddii aadan ku faraxsanayn amarkaaga
Iyadoo ku saleysan qiimeynta 17
Faallo ka qor
Dib u eegista macaamiisha
Runti waad mahadsantahay
aad u wanaagsan oo xirxiran iyo hadiyad yar
Се как на картинке! Ень довольна! Оба есть!
олностью соответствует описанию. супер!
Се ок, супер! Екомендую товар и продавца
Dhowaan la eegay
Spam majiro Kaliya Kuuboonada, Macaamil Weyn, Qiimo dhimis & Keydsi badan.
WoopShop: Goobta Ugu Dambeysa ee Dukaameysiga Online Haddii aad jeclaan lahayd inaad la kulanto sida ugu wanaagsan ee wax looga iibsado khadka tooska ah ee ragga, haweenka, iyo carruurta, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah. WoopShop waa meesha ugu dambeysa ee loogu talagalay moodada iyo qaab nololeedka, iyada oo marti loo yahay noocyo kala duwan oo ganacsi oo ay ka mid yihiin dharka, kabaha, qalabka, dahabka, alaabta daryeelka shakhsi ahaaneed iyo inbadan. Waxaa la joogaa waqtigii dib loogu qeexi lahaa bayaankaaga qaab-dhismeedkayaga qaan-gaarka ah ee alaabada casriga ah. Dukaankeena internetka ayaa kuu keenaya alaabtii ugu dambeysay ee naqshadeeye toos uga baxa guryaha moodada. WoopShop waxaad kaga adeegan kartaa khadka tooska ah ee WoopShop adoo ka helaya raaxada gurigaaga oo waxaad ka heli kartaa waxyaabaha aad ugu jeceshahay midig albaabkaaga. shaqeynta ragga, haweenka, iyo caruurta. Waxaad ogaan doontaa in cirka uu yahay xadka marka ay timaado noocyada dharka ee aad soo iibsan karto munaasabadaha kala duwan. Dharka ragga casriga ah - WoopShop waxaad ka heli doontaa ikhtiyaarro aad u tiro badan oo ah shaati rasmi ah iyo surwaal, funaanado qabow iyo jiinis, ama kurta iyo iskudhafka laysku daro ragga. Ku xir aragtidaada funaanado daabacan. Abuur muuqaal dib-u-dhiska xarunta ah oo leh funaanado kala duwan iyo joonisyo dhib badan. Ha ahaato gingham, gisi ama qaab daaqad-daaqad, shaatiyada la hubiyey inay caqli badan yihiin. Ku dhaji iyaga chinos, jiinis xiran ama surwaal la jaray si aad uhesho muuqaal caadi ah. Xulo muuqaalka lakab muuqaal leh oo leh jaakadaha rookaha. Madaxa cimilada daruuraha leh geesinimo ugu jirta jaakadaha biyaha u adkeysta. Ka eeg qaybtayada gudaha si aad u hesho dhar ku caawiya taas oo kaa dhigaysa inaad ku kalsoon tahay dhar kasta. Dharka haweenka ee casriga ah - Dukaamaynta tooska ah ee haweenka ee WoopShop waa khibrad kor u qaadaysa niyadda. U fiirso sinta oo ku raaxeeyso chinos iyo gaagaaban daabacan xagaagan. Fiiri kuleylka taariikhdaada oo ku labisan dhar yar oo madow, ama dooro dharka casaanka ee xasiloonida. Dharka la jeexjeexay iyo T-shaatiyada ayaa matalaya ruuxda caadiga ah ee moodada badda. Dooro kuwa aad ugu jeceshahay Bardot, garabka-garabka, qaabka shaatiga, blouson, xarkaha iyo dusha sare ee peplum-ka, si aad uhesho wax yar. Ku wada diyaari joonis jilicsan oo jilicsan, goonooyin ama palazzos. Kurtis iyo jooniska ayaa sameeya isku-dhafka isku-dhafan ee isku-dhafan ee loogu talagalay magaalooyinka qabow. Cunnooyinkayaga waaweyn iyo xulashooyinka lehenga-choli waxay ku habboon yihiin inay aragti ka muujiyaan munaasabadaha waaweyn ee bulshada sida aroosyada. Dharkeenna nooca loo yaqaan 'salwar-kameez', kurtas iyo Patiala suits ayaa ikhtiyaarro raaxo leh u leh xirashada joogtada ah. Kabaha moodada leh - In kasta oo dharka ay ka dhigayaan ninka, nooca kabaha aad xiran tahay ayaa ka tarjumaya shakhsiyaddaada. Waxaan kuu soo qaadaneynaa xulasho dhameystiran oo xulashooyinka kabaha aan caadiga aheyn loogu talagalay ragga sida kabaha isboortiga iyo rootiga. Samee bayaanka awooda shaqada oo ku labisan brogues iyo oxfords. Ku tababbar maaratoonkaaga kabaha orodka ee ragga iyo dumarka. Xullo kabo ciyaar shaqsiyeed sida tennis, kubada cagta, basketball iyo wixii la mid ah. Ama u gudub qaabka aan caadiga ahayn iyo raaxada ay bixiyaan kabaha, dhalooyinka, iyo is-rogidda. Baadhitaankeena safka ah ee kabo moodada leh oo loogu talagalay dumarka oo ay kujiraan bambooyin, kabo cidhibtiro ah, cidhibbo cirif ah, iyo qalin cidhib. Ama ku raaxayso sida ugu fiican ee raaxada iyo qaabka leh guryaha qurxinta iyo birta ah. Qalabka casriga ah - WoopShop waa mid ka mid ah bogagga internetka ee ugu wanaagsan ee laga iibsado qalabka fasalka oo si dhammaystiran u dhammaystira dharkaaga. Waxaad dooran kartaa analogga casriga ah ama saacadaha dhijitaalka ah oo aad iyaga ugu dhigmi kartaa suumanka iyo xargaha. Soo qaado boorsooyin waasac ah, boorsooyin dhab ah, iyo boorsooyin si aad waxyaabaha aad muhiimka u ah ugu keydiso qaab. Haddii aad doorbideysid dahabka ugu yar ama waxyaalaha waaweyn iyo kuwa dhalaalaya, ururintayada dahabka ee internetka ayaa ku siineysa fursado badan oo cajiib ah. Amiiraddaada yar waxay jeclaan doontaa noocyo kala duwan oo qurux badan oo qurux badan, kabo ballerina ah, duubabka madaxa, iyo goos gooska. Ku farxi wiilkaaga adoo ka soo qaadanaya kabo isboorti, funaanado superhero ah, funaanado kubada cagta ah iyo waxyaabo badan oo ka badan dukaankayaga internetka. Halkan ka fiiri safkeena alaabada lagu ciyaaro oo aad ku abuuri karto xusuus aad ku jeceshahay. Saabuunadeena, jalaatada qubeyska, kareemada daryeelka maqaarka, kiriimyada, iyo alaabada kale ee ayurvedic ayaa si gaar ah loo sameeyay si loo yareeyo saameynta gabowga isla markaana loo soo bandhigo khibrada nadiifinta ugu fiican Ka dhig nadiif madaxaaga iyo timahaaga uber-stylish leh shaambooyada iyo alaabada daryeelka timaha. Dooro qurxiyo si aad u xoojiso quruxdaada dabiiciga ah. Ku dar midab iyo dabeecad qolalkaaga jiifka qolka gogosha iyo daahyada. Adeegso miiska miiska xariifka ah si aad ugu qanciso martidaada. Qurxinta darbiyada, saacadaha, muraayadaha sawirada, iyo dhirta macmalka ah ayaa hubaal ah inay nolosha ku neefsan doonaan gees kasta oo ka mid ah gurigaaga. Fiiri soogalootigayada cusub si aad u daawato dharka naqshadeeye ee ugu dambeeyay, kabaha, iyo agabyada ka jira suuqa. Waxaad ku heli kartaa gacmahaaga qaabka ugu wanaagsan xilli kasta oo aad xiran tahay. Waxaad sidoo kale ka faa'iideysan kartaa qaabka ugu wanaagsan ee moodada qowmiyadeed inta lagu jiro dhammaan munaasabadaha ciidaha ee Hindida. Waxaad hubtaa inaad la dhacsan tahay qiimo dhimistayada xilliyeed ee kabaha, surwaalka, shaatiyadaha, boorsooyinka dhabarka iyo waxyaabo kale oo badan. Iibinta-xilli-dhamaadka waa waayo-aragnimada ugu dambeysa marka moodadu si aan macquul ahayn u awoodi karto.Shop Online oo ku yaal WoopShop Iyadoo leh Kalsooni Buuxda Sababta kale ee WoopShop ugu fiican tahay dhammaan dukaamada internetka ayaa ah sida ugu habboon ee ay bixiso. Waxaad ku daawan kartaa noocyada aad jeceshahay xulashooyinka qiimaha ee alaabooyinka kala duwan hal meel. A interface-user-saaxiibtinimo ayaa kugu hagi doona adiga habka xulashada. Jaantusyada cabbirka oo dhameystiran, macluumaadka sheyga iyo sawirrada xallinta sare waxay kaa caawinayaan inaad gaarto go'aamada iibsiga ugu fiican. Waxaad sidoo kale leedahay xorriyad aad ku dooran karto ikhtiyaarrada lacag-bixintaada, ha noqoto kaar ama lacag-bixinta. 15-ka maalmood ee soo noqoshada waxay ku siineysaa awood badan iibsade ahaan. Intaa waxaa sii dheer, ikhtiyaarka-iyo-iibsiga ikhtiyaariga ah ee alaabada la xushay waxay u qaadaysaa macaamil-saaxiibtinimo heerka xiga.Waxaad ku raaxeysataa khibrad-aan-dhib lahayn adigoo si raaxo leh uga dukaameysanaya gurigaaga ama goobtaada shaqada. Android | macruufka
Bixinta iyo Bixinta
Soo Celinta iyo Soo Celinta Siyaasadda
Asturnaanta & Shuruudaha
Masuuliyadda Bulshada ee Shirkadda
Nama uu soo raaco
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 73160.
Hababka lacag bixinta waa la aqbalay
Macaamiisheena ayaa noo hadlaya
dib u eegista 73160
Isku-dheelitir La-Isticmaali karo Dolce Gusto adabtarada N Capresso Capsule
Super had iyo jeer waan dalban lahaa ku habboon dhammaan kaabsoosha Nespresso saafi ah. Wanaagsan
Shaati Gaaban Giraffe Slim Fit Ragga Polo Shaati
T-shaati aad u wanaagsan, tayo leh, mahadsanid!